Abavelisi beeMaski zoNyango kunye nabaThengi -iFektri yaseTshayina- Ukungenisa kunye nokuThengisa iiNtengiso kumazwe angaphandle eTshayina, Ltd.
Ikhaya > Iimveliso > Imaski > IiMaski zoNyango
Imaski yezonyango yenziwa ubukhulu becala enye okanye ezingaphezulu zeelaphu ezingalukwanga. Inkqubo eyintloko yokuvelisa iimaski zonyango zibandakanya i-meltblown, spunbond, umoya oshushu okanye i-acupuncture, njl.
Imaski yesiNgesi yobisi: imaski
Iimpawu zemaski yezonyango: Imaski yokhuselo enobuchule ekufuneka inxitywe kuncedo lwezonyango
Ukwakhiwa kwemaski yonyango: ubuso bemaski kunye nebhanti yexinzelelo
Icandelo lokulawulwa kwemaski yonyango: Izixhobo zeklasi II zonyango
Uhlobo lokwahlula imaski yonyango: iimveliso zokukhusela
Ukuqulunqwa kunye nokusebenza kweeMaski zoNyango
Iimaski zonyango ziqulathe ubuso be-mask kunye ne-tension band. Imaski yobuso yahlulahlulwe yangaphakathi, eliphakathi kunye nelingaphandle. Ungqimba lwangaphakathi luyi-gauze ecocekileyo okanye ucoceko olungalukwanga. Isambatho esingalukwanga okanye ungqameko lwe-polypropylene ye-meltblown ye-Ultra. Le maski yokhuselo esebenzayo yezonyango inamandla kakhulu e-hydrophobic kwaye inokuphefumla, kwaye inefuthe elibonakalayo lokucoca kwii-aerosols ezincinci okanye uthuli olunobungozi. Iziphumo zokucoca zizinto zonke zilungile, izixhobo ezisetyenzisiweyo azinabungozi kwaye zingenabungozi, kwaye zikhululekile ukunxiba.
Buso Medical kungavimbela izifo ezibangelwa enobubanzi emoyeni â 5Î¼mg ezasulelayo okanye kufutshane-umqolo (â â 1m) exposure izifo ukuba droplet-umna. Ukusebenza kwesixhobo sokuhluza imaski kufuneka kungabikho ngaphantsi kwe-95%, kwaye nenqanaba lokukhusela liphezulu.
Iimaski zonyango zezixhobo ezingcono zokukhusela. Kuyacetyiswa ukuba uzinxibe xa kukho ukungcoliseka okukhulu kwezendalo okanye izifo ezosulelayo kwezonyango (ezinjengesifo sokuphefumla).
Khusela umzimba womntu kumasuntswana omoya
˜ Efanelekileyo ukukhusela abasebenzi bezonyango kwiindawo ezinesifo esosulelayo
â˜ † Kufanelekile ukukhuselwa kwabasebenzi bebhubhoratri
Ukukhuselwa kwabasebenzi abahlukeneyo ngeli xesha lobhubhane
˜ † Ikhemikhali enetyhefu, abasebenzi basezimayini, abangadibani nepolo
Ukukhuselwa komntu ngamnye kwezixhobo zenzululwazi yemfazwe
Ukuchazwa kwemveliso yeMasks yoNyango
Ngokomgangatho kazwelonke we-GB 19083-2003 "Iimfuneko zobugcisa kwiMaski yoKhuseleko lwezoNyango", ubungakanani beemaski zokukhusela ezonyango zezi:
Ubungakanani benxalenye ephakathi yemaski eluxande emva kokufakwa: ubude abukho ngaphantsi kwe-17cm, kwaye ububanzi abungaphantsi kwe-17cm;
Ubungakanani be-arch-fit mask esondeleneyo: ububanzi obuyiyo bungaphantsi kwe-14cm, kwaye isentimitha esingqamlezileyo asikho ngaphantsi kwe-14cm .
Izalathi zezobugcisa ezibalulekileyo zeMasks yoNyango
Kubandakanya ukungasebenzi kokucoceka kokungafuneki kweoyile kunye nokuhamba komoya.
(1) Ukusebenza kokufezekisa: Ngaphantsi kwemeko yokuhamba komoya (85 ± 2) L / min, ukusebenza ngokufayilwayo kwe-aerodynamic Median di (0,24 ± 0.06) Î¼m sodium chloride aerosol ayikho ngaphantsi kwe-95%, engqinelana I-N95 (Okanye i-FFP2) nangaphezulu.
(2) Ukuxhathisa okukhuthazayo: Ngaphantsi kweemeko zokuhamba okungasentla, ukunganyangeki kungaphezulu kwe-343.2Pa (35mm H2O).
Unxiba njani imaski entloko
(1) Bancamathela ngobunono isiqwengana sempumlo kwaye ubeke imaski ebusweni bakho, uqiniseke ukuba uyagubungela impumlo yakho kunye nomlomo.
(2) Ibhendi ye-elastiki ibethelelwe entlokweni ukuthintela umoya ukuba ungangeni.
(3) Ibhendi ephantsi ye-elastic iboshwe entanyeni kwaye iboshwe.
(4) Qiniseka ukuba uyivula ngokupheleleyo imaski ukuze unciphise inani lezinto ezisetyenzisiweyo xa uphefumla.
Unxiba njani iimaski ezixhonywe kwindlebe
(1) Beka ikliphu yakho yempumlo kwindawo ephezulu yezandla zakho ngesebenti, kwaye ubeke imaski ngeempumlo kunye nomlomo
(2) Isikhuseli-ndlebe kufuneka sibekwe kwisiseko sendlebe kwaye sisasazeke entloko ukuya ezinzwaneni ukuze imiqhekezo yemaski ingatyhileki ngokupheleleyo. Oku kunceda ukugubungela ubuso buye phezulu kwaye kunciphise inani leelayita ezifunekayo ekuphefumleni.
(3) Cinezela kancinci isiqwengana sempumlo ukuthintela umoya ungangeni.
Iifayile ezishisayo: IiMaski zoNyango, abaVelisi, abaThengi, iiVenkile eziNinzi, iiFektri, Thenga, China, ezenziwe eTshayina, amaxabiso, uLuhlu lwamaXabiso, uQikelelo-maxabiso, i-CE, i-FDA
Imaski yokulahla inkunkumaImaski yokuchaphazeleka kwesifoImaski ye-KN95 yonyangoImaski yezonyango N95Imaski yobuso bezonyangoImaski yokulahla ubuso ngonyangoUgqirha wobuso uN95Unyango lobuso lwe-KN95Imaski elwa nentsholongwaneUnyango lobuso lwe-anti-virus